समाचार - मैनबत्ती टनेलिङ कसरी ठीक गर्ने र रोक्न
मैनबत्ती टनेलिङ कसरी ठीक गर्ने र रोक्न
मैनबत्ती टनेलिङ भनेको कन्टेनरको छेउमा ठोस मोमको छेउ छोडेर वरपरका सबै मोमलाई नपगाइकन मैनबत्तीको केन्द्रमा जलेको मैनबत्ती पग्लिने घटना हो। बत्तीमा रहेको ज्वालाले तलतिर एउटा ठाडो "सुरुङ" बनाउँछ, जतिबेला यो जल्छ, छेउमा धेरै मोम छोड्छ।
सौभाग्य देखि, त्यहाँ केही चालहरू छन् जुन तपाईंले सुरुङमा परेका मैनबत्तीहरू ठीक गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, तर सबैभन्दा राम्रो औषधि भनेको रोकथाम हो!
यदि तपाईंले मैनबत्ती छोड्नुहुन्छ जुन आफैंले सुरुङ बनाउँछ, कहिलेकाहीँ यसले बाँकी मैनलाई सच्याउँछ र पगाल्छ, तर धेरैजसो समय यो हुँदैन, तपाईंलाई कन्टेनरको परिधि वरिपरि ठोस मैनको स्थायी औंठीको साथ छोड्छ।
तपाईंले कुनै पनि मोम बर्बाद गर्नबाट बच्न छिटो कार्य गर्न आवश्यक छ! तपाईं जति लामो पर्खनुहुन्छ, यो ठीक गर्न गाह्रो हुन्छ।
यदि मैनबत्ती सुरुङमा जारी छ भने:
l अक्सिजन सकिएमा वा वरपरको मोम पग्लिएर आगोलाई डुबाएर वा,
l यसले जलेको समाप्त गर्नेछ, तर मैनबत्तीको लागि नाटकीय रूपमा छोटो समयको लागि नेतृत्व गर्ने सबै मैन उपभोग नगरी।
सुरुङ रोक्नको लागि सबैभन्दा सजिलो तरीका भनेको यसलाई सुरुमा हुनबाट रोक्नु हो, तर यदि यो हातबाट बाहिर जान्छ भने यसलाई ठीक गर्न सम्भव छ।
यस गाइडमा तपाईंले सिक्नुहुनेछ:
टनेलिङको कारण के हो
टनेलिङ सुरु हुनबाट कसरी रोक्ने
तपाइँ कसरी तपाइँको मनपर्ने मैनबत्तीहरूमा टनेलिङ ठीक गर्न सक्नुहुन्छ
मैनबत्ती टनेलिङको कारण के हो?
मैनबत्ती टनेलिङ पहिचान गर्न सजिलो छ किनभने यसले पछाडि छोडेको विशेषता "छोरा"।
मैनबत्तीहरू टनेलिङका लागि दुई मुख्य अपराधीहरू छन्।
मोम मेमोरी बुझ्नको लागि हामीले मैनबत्तीको जीवनचक्रमा के हुन्छ भनेर कुरा गर्न आवश्यक छ। जब मैनबत्ती मोम पग्लन्छ, यो तरल बन्छ।
तर जब यो फेरि चिसो भएर ठोस बन्न पुग्छ, यो विक बाल्नुअघि जस्तो "कडा" हुँदैन। मोमको आधारमा, यो "कडा" हुन केही दिन वा दुई हप्ता पनि लाग्न सक्छ, जति तपाईंले बत्ती बाल्नु अघि थियो।
यसको मतलब ताजा पग्लिएको मोम नरम हुन्छ, र फेरि तरल पदार्थमा पग्लिन धेरै कम तातो लाग्छ।
जब तपाईंले बत्तीलाई पुन: उज्यालो गर्नुहुन्छ, पहिले पग्लिएको क्षेत्र पहिले पग्लिनेछ, र बाँकी मैन भन्दा धेरै छिटो।
मोम मेमोरी भनेको मैनबत्तीको क्षेत्र हो जुन बाँकी मैनबत्तीको तुलनामा धेरै छिटो पग्लन्छ किनभने यसले मूल कठोरतालाई चिसो पारेको छैन।
यदि तपाईंले मैनबत्तीलाई मैनको बाहिरी औंठी पग्लन पर्याप्त समय दिनुभएन भने, र यसको स्मरणशक्ति बढाउन, ज्वालाले बाहिरी औंठीलाई पगाल्न असम्भव नभएसम्म बत्ती तल सुरंग गर्न थाल्छ (किनकि गर्मी छ। धेरै कम)। मैनबत्तीले मैनको सबैभन्दा नरम भागलाई पग्लिरहन्छ जबसम्म यो अक्सिजन समाप्त हुँदैन वा तपाईंको जारमा पग्लिएको मैनको ठूलो औंठी छोडेर तल पुग्दैन।
मोम मेमोरीबाट मैनबत्ती टनेलिङ मैनबत्ती मालिकको खराब जलाउने व्यवहारको कारण हो।
मैनबत्ती निर्माताहरूलाई थाहा छ कि सही विक छनोट गर्नु मैनबत्तीको डिजाइनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तत्व हो।
मैनबत्तीमा अरू सबै कुरा गुनगुनाउन सक्छ, तर यदि बत्ती सही आकारको छैन भने यसले फरक पार्दैन।
मैन मेमोरीले बाहिरी मैन पग्लने मौका पाउनबाट बात्तीलाई रोक्छ, तर खराब बाताको आकारले यसलाई असम्भव बनाउँछ।
जब मैनबत्तीको बत्ती धेरै सानो हुन्छ, यसले पर्याप्त मात्रामा मोमको ठूलो क्षेत्र पगाल्न पर्याप्त तातो उत्पन्न गर्न सक्दैन। यस अवस्थामा यो तलको प्वालमा जति फराकिलो प्वालमा जल्छ जति बात्ती पग्लन सक्षम हुन्छ।
साँच्चै चिसो कोठाहरूले पनि सही मात्रामा मोम पग्लन गाह्रो बनाउँछ। उदाहरणका लागि, यदि तपाईंले जाडोको समयमा बाहिर एउटा मैनबत्ती जलाउनुभयो भने तपाईंले फेला पार्नुहुनेछ कि लगभग हरेक मैनबत्ती सुरुङहरू। यो किनभने ठोस मोमलाई यसको पग्लने बिन्दुमा उठाउन आवश्यक छ जुन चिसो कोठामा आराम गर्दा अझ लामो समय लाग्छ।
मैनबत्तीमा गलत बाताको साइज हुनुको विकल्प छैन। मैनबत्तीको मैनबत्तीको डिजाइनको कारणले गर्दा मैनबत्तीको साइज गलत छ।
सुरुङ निर्माण हुनबाट कसरी रोक्ने
सुरुङ निर्माण हुनबाट रोक्नको लागि तीनवटा मुख्य रणनीतिहरू छन्।
पहिलो सामान्य मैनबत्तीहरूमा लागू हुन्छ, र दोस्रो मैनबत्ती निर्माताहरूका लागि हो जुन सुरंग नगर्ने मैनबत्ती डिजाइन गर्ने प्रयास गर्दछ।
1. कम्तिमा3घण्टाको लागि मैनबत्ती जलाउनुहोस्
कडा र छिटो नियम होइन, तर तपाईं मैनबत्ती पग्लन सुरु गर्न समय छ भनेर सुनिश्चित गर्न चाहनुहुन्छ। यदि यो अरू केहि पग्लनु अघि धेरै गहिरो जल्यो भने, ज्वालाले सतहलाई राम्ररी पग्लने मौका पाउनेछैन र यो समस्या हुनेछ।
चीजहरू हुन्छन् र कहिलेकाहीँ तपाईंले मैनबत्ती मात्र बुझ्नुहुन्छ कि तपाईंले यसलाई तुरुन्तै निभाउनु पर्छ। ठिक छ। तर निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंले मैनबत्तीलाई यसको पहिलो केही "सत्रहरू" मा कम्तिमा3देखि4घण्टासम्म जल्ने मौका दिनुभयो। यदि तपाइँ यसलाई लामो समय सम्म जल्न दिनुहुन्न भने, मोम मेमोरी सानो रहनेछ र तपाइँको मैनबत्ती सम्भवतः सुरुङ सुरु हुनेछ।
2. सही विक साइज प्रयोग गर्नुहोस्
टनेलिङको अर्को मुख्य कारण अनुचित विक साइज हो।
यदि तपाइँ मैनबत्ती निर्माता हुनुहुन्छ भने, तपाइँ तपाइँको मोम र कन्टेनरको लागि सही विक साइज र श्रृंखला छनौट गर्न तपाइँको मैनबत्तीहरू परीक्षण गर्दै हुनुहुन्छ भनेर सुनिश्चित गर्नुहोस्। कसैलाई पनि फोहोर मैनबत्ती मन पर्दैन। यदि तपाईंको मैनबत्तीको डिजाइन सुरुङमा छ भने, अर्कोको लागि आफ्नो विकको आकार बढाउनुहोस्। यसले सामान्यतया कम आकारको विक समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्दछ। र परीक्षण जलाउन नबिर्सनुहोस्।
मैनबत्ती टनेलिङ एक धेरै सामान्य समस्या हो र सामान्यतया ठीक गर्न धेरै प्रयास लाग्दैन। यद्यपि मोमको मेमोरी छ, राम्ररी डिजाइन गरिएका मैनबत्तीहरूले सामान्यतया समस्यालाई सच्याउन सक्छ तर कहिलेकाहीँ चीजहरू हुन्छन् र तपाईंले कठोर कदम चाल्नु पर्छ!
मैनबत्ती रोई वा खारेज गर्नुको सट्टा, यसबाट एउटा सानो शिल्प परियोजना बनाउने विचार गर्नुहोस् र माथिका चालहरूद्वारा यसलाई पुनर्स्थापित गर्नुहोस्।
जे होस्, सबैभन्दा राम्रो औषधि भनेको रोकथाम हो, त्यसैले मोम लगातार पग्लिएको सुनिश्चित गर्नको लागि तपाईंले पहिलो केही जलेको लागि कम्तिमा3देखि4घण्टाको लागि नयाँ मैनबत्तीहरू जलाउन सुनिश्चित गर्नुहोस्।
पोस्ट समय: नोभेम्बर-23-2021